Jiga ee Degaanka Rate Up dalka Turkiga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaJiga ee Degaanka Rate Up ee Turkey
06 / 03 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, TURKEY, TELPHER
heerka korodhka goobaha hoyga dalxiiska ee Turkey
Tirada yimid fududeyn in Turkey sanadkii la soo dhaafay in 80,87 million, halka tirada habeen goobta la joogo gaadhay 211,29 million.
Sida ku xusan tirakoobka hoyga ee ay soo saartay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska, 62,86 boqolkiiba dadka jooga xarumahan sanadkii la soo dhaafay ayaa ajnabi soo booqday.
Tirada dadka imanaya xarumaha guryaha ee ay xaqiijiyeen wasaaradaha iyo degmooyinka ayaa kordhay 2019 boqolkiiba sanadka 12,38 marka la barbar dhigo sanadkii hore 80,87 milyan, tirada habeen dhaweydna korodhay boqolkiiba 10,8 marka loo eego sanadkii hore oo ay gaadhay 211,29 milyan.
Celcelis ahaan joogitaanka xarumaha waxay ahayd 2,61 maalmood, iyo heerka deganaanshaha wuxuu ahaa 53,48 boqolkiiba. Boqolkiiba 24,68 ee xalay fiidkii hore ee xarumaha guryuhu degmadu xaqiijisay iyo 75,32 boqolkiiba xarumaha la-haysto ee leh ruqsadda hawlgalka Wasaaradda.
Inta badan Soo booqdayaasha Xarumaha waxay yimaadaan Juun-October
Bilaha, xarumaha waxay martigeliyeen inta badan booqdayaasha bilaha Juun iyo Oktoobar. Muddadii Abril-Oktoobar ayaa ahayd bilaha ugu badan ee habeenkii.
Heerka ugu sarreeya ee degganaashaha waxaa la gaarey bishii Agoosto iyada oo 77,48 boqolkiiba sanadka oo dhan. Heerka deganaanshuhu wuxuu ahaa kii ugu hooseeyay bishii Nofembar-Maarso.
Ajaaniibta, martida ugu badan ee habeenka martida la ahaa waxay ahaayeen Russia oo leh 23,43 boqolkiiba, Jarmalka ayaa kaalinta labaad galay 19,36 boqolkiiba, England waxay gashay kaalinta 7,35aad iyadoo leh 3,19 boqolkiiba, Ukraine ayaa kaalinta afraad gashay iyadoo leh 2,99 boqolkiiba, Poland ayaa kaalinta shanaad gashay iyadoo leh boqolkiiba XNUMX.
Wadaaga wadamada kale wadarta guud waxay ahayd boqolkiiba 43,69.
Antalya waa doorashada koowaad ee dadka maxalliga ah iyo ajaanibta
Martida guryuhu waxay si aad ah ugu qarash gareeyeen Antalya sanadkii la soo dhaafay boqolkiiba 14,68. Antalya waxaa ku xigay Istanbul, Muğla, İzmir iyo Ankara, siday u kala horreeyaan.
Soo-booqdeyaasha shisheeyuhu waxay kaloo degeen xalay fiidkii Antalya iyagoo leh 62,9 boqolkiiba. Istanbul, Muğla, Aydın iyo İzmir ayaa ku xigay, siday u kala horreeyaan.
In kasta oo Antalya ay ahayd tii ugu horreysay ee waddo-habeyn habeennimo ah oo ay sameeyaan martida gudaha iyo shisheeyaha, Istanbul waxay gashay kaalinta labaad, Muğla saddexaad, İzmir afraad, iyo Aydın shanaad.
Marka ugu horeysa ee Waqtiga Joogtada ah ee Niger
Joogitaanka habeenka ee ay soo booqdaan dadka shisheeyaha ah, dadka reer Nigeria ayaa kaalinta koowaad ka galay celcelis ahaan joogitaankooda 4,94 maalmood. Niger waxaa ku xigay Luxembourg oo leh 4,74 maalmood, Latvia oo leh 4,61 maalmood, England oo leh 4,57, Micronesiana waxay heshay 4,44.
Shan Xiddig oo Hoteel Horey u Dooran
Joogtada ugu badan ee habeenka la joogaa waxay ahayd 38,26 hudheel xiddig leh oo leh boqolkiiba 5.
Kaalinta labaad, hoteellada leh shahaadooyin degmo oo leh boqolkiiba 17,88 boqolkiiba, iyo kaalinta saddexaad oo leh huteelo 17,50-xiddig leh oo ay wasaaradu ka xaqiijisay 4 boqolkiiba.
Hotelada 3-xiddig ayaa noqday kuwa afraad iyo tuulada Fasaxyada Fasaxa 1aad waxay noqdeen xarumaha shanaad ee ay doorbidaan.
Ogeeysiinta wax soo iibsiga: Dayactirka xayndaabka iyo xarumaha T1-T4
Factory Open ee Gebze BPW, in Continue Maalgelinta Turkey